Cabsi Xoogan oo ka jirta Gobolka Sh/Hoose iyo Ciidamada AMISOM oo Isga baxay deegono badan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mahadaay (mareeg News ) Wararka naga soo gaaraya degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan AMISOM, gaar ahaan ciidanka Burundi ay isaga baxeen deegaanka Cali Fool-dheere oo saldhig ku lahaayeen.
Ciidamada AMISOM ayaa soo faarujiyay deegaanka Cali Fooldheere oo qiyaastii 20KM u jirta Mahadaay Goob-joogayaal ku sugan degmada Mahadaay ayaa sheegay in ciidamada ka soo ruuqaansadeen Cali Fooldheere, kuna soo wajahan yihiin Mahadaay, iyadoo la maqlayay madaafiic lagu ridayay dhanka howdka oo ahaa mid ciidamada jidka loogu furayay.
ciidamadaan ayaa lasheegay in bariyii danbe ay kacabanayeen biyo la aan soo foodsaartay waxaana jirtay in mararbadan wadada loogay qasaarana kasoo gaartay.
Saraakiisha Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in roob xoog leh habeenadii la soo dhaafay uu ka da’ayay Shabeelaha Dhexe kaas oo biya dhigay gobalka, balse sidoo kale saameyn balaaran ku yeeshay Gaadiidka AMISOM kadib markii uu biya dhigay Wadooyinkii ay Isticmaali jirayn Ciidamada AMISOM.
Lama oga sababta ka dambeysa Guuritaanka Ciidamada AMISOM ee deegaanka Cali Fool-dheere, waxaana wararka ay intaas ku darayaan in ay degayn degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelaha dhexe Ciidamadii ka soo baxay Cali Fool-dheere.